Global Voices teny Malagasy » Fantaro i Mei Jeanne Wagner, hitantana ny kaonty Twitter @NativeLangsTech mandritra ny herinandron’ny 11-17 Jolay · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Jolay 2019 5:10 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sary nomen'i Mei Jeanne Wagner.
Amin'izao taona 2019 izao sy ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam-piteny antserasera , hifandimby ireo Afrikana mpikatroky ny teny sy mpanandrateny hitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang  hizara ny zava-niainany tamin'ny famelomana aina indray sy fampahafantarana ireo fiteny tompotany amerikana sy Firenena voalohany. Ny lahatsoratra etoana dia momba an'i Mei Jeanne Wagner (@aloha_aina ) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro itantanany ny kaonty.
Rising Voices: Mba lazao anay ny momba anao.
‘O Kealohapoina'ole ke kāne no Nu'uanu
‘O Caroline ka tsy hilao an'i Hilo
Noho i Pūlāma sy ny hoe ‘ia’ o Edward, dia izy ihany koa
Rehefa anontaniana momba ny tenany ny Hawaiians, matetika izy ireo manomboka ny valiny amin'ny mo'okū'auhau (tetiarana). Ny hevitra amin'izany dia ny mba hahatakatra olona iray, manampy amin'ny fahafantarana hoe avy aiza izy ireo. Eo ambony misy sombin'ny mo'okū'auhau ahy. Ao no hahitanao ny ray aman-drenibeko Kealohapoina'ole sy Caroline. Ny anaran'izy ireo dia maneho ny iray amin'ireo tolona kānaka maoli (Hawaiian Teratany) niseho tany am-piandohan'ny taonjato faha-20. Nisy fotoana rehefa noraràna ny fampianarana ny teny Hawaiéana ary tena naha-voasazy mafy ny fampiasana azy, tsy maintsy nanapa-kevitra ny ray aman-drenin'izy ireo na hahafoy ny fitenin'izy ireo na hijoro ary hiharitra valifaty.
Afaka ‘ōlelo (miteny Hawaiiana) ny raibe sy renibeko, saingy nokapohina tany an-tsekoly noho ny fampiasana izany. Tahaka ny maro, nitondra izany ratra an-tsaina izany teo amin'ny maha-olon-dehibe azy izy ireo. Noho izany, lehibe tamin'ny fandrenesana ny teny Hawaiiana ho toy ny tsiambaratelo, teny fibitsihana ny zanany lahy – izany hoe ny raiko. Tamin'ny taonjato faha-1970 tamin'ny fiterahan'ny teny Hawaiiana indray vao afaka nirehareha tamin'ny fiteniny izy ireo. Nandritra io vanim-potoana io, maro ireo lasa mpikatroka mafàna fo ho an'ny ‘Ōlelo Hawai'i ary nanomboka nampianatra azy ireo tamin'ny keiki (ankizy). Soa ihany fa nahazo tombony tamin'izany fotoana izany aho. Miaraka amin'ny traikefan'izy ireo sy ny fijoroan'izy ireo hatramin'ny farany, dia tonga aho hankamamy ny harena narovan'ny kūpuna (zokiolona) ho anay- Ka ‘Ōlelo Hawai'i.
RV: Manao ahoana ny toeran'ny fiteninao amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto ankehitriny?
‘Mbola fiteny atahorana ny Ōlelo Hawai'i. Taorian'ny telopolo taona nampiroboroboana ny fampianarana ny teny Hawaiiana, vao manomboka manomana ny tany hanorenana ny fototry ny fiteninay izahay. Miaina ny sarotra hatrany ireo andry hijoroan'ny ezaka famelomana indray ny fiteny Aha Pūnana Leo  sy Kula Kaiapuni izay mahatonga anay hijery tsara ny zavatra ampianarinay, ny fomba fampianarana izany ary ny kalitaon'izany fampianarana izany.
Amin'ny maha-kūpuna anay, dia miasa ihany koa izahay mba hiantohana fa mahazo ny fahalalana sarobidy mikasika ny mānaleo (teratany mpampiasa ny teny) ireo mpianatra ny fiteny – tsy ny voambolana sy ny fitsipi-pitenenan'ny ‘Ōlelo Hawai'i ihany, fa ny kolontsaina sy ny fomba fisainana ao anatin'izany koa.
Soa ihany fa manana taranaka vaovao mpianatra ny fiteny izahay, izay manandratra avo ny kūpuna eo amin'ny sorony sady miankina amin'ny fahaiza-manaony nomerika mba hamoronana fitaovana fampianarana vaovao. Na dia ao anatin'ny fahazazana nomerika aza izahay indraindray, mivoatra ireo tranonkala sy fitaovana vaovao mba hihaonana amin'ireo mpianatra izay misy azy ary manome fanohanana amin'ny karazana fianarana samihafa.
RV: Amin'ny lohahevitra inona no kasainao hifantohana mandritra ny herinandro izay hitantananao ny kaonty Twitter @NativeLangsTech?
Satria mbola tsy ampy ny fahaizako ny teny, dia tiako ampiasaina ity herinandro ity mba hanasongadinana ny fahendren'ny kūpuna sy ny kumu (mpampianatra) izay miasa am-pahavitrihana mba hiantohana fa miroborobo ny teny Hawaiiana.
RV: Inona no tena antony manosika anao amin'ny fikatrohana nomerika ho an'ny fiteninao? Inona no fanantenanao sy nofinofinao ho an'ny fiteninao?
Fitiavantena ny antony nanosika ahy voalohany hanampy ny vondro-piarahamonina nomerika Ōlelo Hawai'i hivoatra. Arakaraka ny fahabetsahan'ny mpiteny sy ny fitaovana misy, no ahafahako mianatra bebe kokoa. Na izany aza, rehefa mivoatra ny fiarahamonina nomerika, dia hitako koa ny fivoaran'ny vondrom-piarahamonina. Ny fanantenako dia hoe ho lasa fiteny fampiasa isan'andro ho an'ny ankamaroan'ny kānaka maoli ny ‘Ōlelo Hawai'i ary ampiasaina ho toy ny fitaovana ho an'ny lasan'ny kolontsainay sy ho an'ny hoavinay amin'ny maha-teratany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/19/141616/